HIM | Health in Myanmar » 2011 » July
သားကြော ဖြတ်ထားသူကို ကလေးပြန်ရအောင်လုပ်ဘို့ အတော်တော့ ခက်ပါတယ်။ ခက်တာကို ရအောင် လုပ်နိုင်သူကို လူတော်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ မရနိုင်တော့လို့ သောကများ မနေသူဟာလဲ ပညာရှိပါဘဲ။
ဆက်ဆံရာတွင် ပါးစပ်ကို အသုံးပြုခြင်း
လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ပါးစပ်ကို အသုံးပြုတာက သိပ်မဆန်းတော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုနည်း လုပ်ပါ-မလုပ်ပါနဲ့လို့ ပြောဘို့က ဆရာဝန်တွေ အလုပ် မဟုတ်ပါ။ သတိထားစရာတွေ မလုပ်မိရင်တော့ ရနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ရှိပါတယ်။ အများသိကြတဲ့ STD လို့ခေါ်တဲ့ လိင်ကတဆင့်ရတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေပါ။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar9 comments
တချိ့ အမျိုးသမီးတွေက နေမကောင်းတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါ။ ဆက်ပြီး ကာကွယ်လိုရင် အခြားနည်းတွေကို သုံးရပါမယ်။ RU486, Mifestone, or Mifeprex တို့လို သားပျက်စေတဲ့ ဆေးမဟုတ်ဘဲ သန္ဓေ မတည်အောင်သာ လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။
အမျိုးသမီး သား-သမီး မရတော့အောင် လုပ်ခြင်း
အမျိုးသမီးများကို ရာသက်ပန် သား-သမီးမရအောင် လုပ်နည်း Permanent Sterilization ၂ နည်းရှိတယ်။ အများဆုံးသုံး-အများလည်း သိတဲ့နည်း ကတော့ သားအိမ်ပြွန်ကို ခြည်-ဖြတ်နည်းပါ။ သားအိမ်ပြွန်ထဲကို (စပရင်) လိုတခု ထည့်ပေးနည်းက နောက်တမျိုးပါ။
ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဆောင်အပြီးမှာ ၄ ရက်လောက်တော့ အမျိုးသမီးက ရာသီသွေးဆင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် သိတာက ရာသီသွေးဆင်းပြီး (၇) ရက်အတွင်း ကလေးမရနှိင်ဘူး။ (၇) ရက်မြောက်မှ ကလေးရနှိင်တာ ဟုတ်ပါတယ်နော်။ (၇) ရက်မြောက်ပြီး အမျိုးသမီး နဲ့ (၆) ရက်ပဲ အတူတူနေရတယ်ဗျ။
New HAARP newsletter
Here is some news from the HAARP newsletter, attached.
စိတ်ဓာတ် ၅၀၊ ဆေး ၅၀
“ဆေးပေးနေရတဲ့ ကလေးအရေအတွက်က တလ တလကို ၁၂ ယောက်၊ ၁၃ ယောက်လောက်အထိ တိုးပွားလာနေတယ်” လို့ HIV/ AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ NLD လူမှုအထောက်အကူပြု အဖွဲ့က မဖြူဖြူသင်းက ပြောပါတယ်။
လိင်ဖျော်ဖြေရေး အခိုင်းခံရသူ မြန်မာ အမျိုးသမီး ၁၁ ဦးကို ကယ်တင်
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း နခွန်ဆီထမရတ်မြို့ရှိ ကာရာအိုကေဆိုင် တဆိုင်တွင် အတင်းအဓမ္မ လိင်ဖျော်ဖြေရေး အခိုင်းခံနေရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီး ၁၁ ဦးကို ယမန်နေ့က ထိုင်း အာဏာပိုင်များက ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
The IAS meeting concludes
Every two years there isagiant international AIDS conference. The IAC. The last one was in Vienna and next year it is in Washington DC. Alternating with these IAC conferences is the IAS conference, run by the same organisation, but attended mostly by scientists. One just ended in Rome.
လိင်စိတ်ရှိနေတာနဲ့ တကယ်တန်း ထိတွေ-ဆက်ဆံတာ ထပ်တူကြချင်မှ ကြမယ်။ ဆိုပါစို့ လိင်စိတ်က ပုံမှန်နေပေမဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး။ အဖေါ်မဲ့တာတွေကြောင့် လက်တွေ့ ရှိမှာမဟုတ်ပါ။ တခါတလေ စိတ်မပါလဲ လက်တွေ့ ဖြစ်တာလဲ ရှိမယ်။
Another comment on sexuality
The following comment was received in response to the anonymous comment on sexuality …
Found the reference that the Australian MSF person must have been referring to. Though he got the figure incorrect. If beginning antiretroviral treatment at the 'new' CD4 threshold of 350 becomes national 'policy' then there are 120,000 people estimated to be in need of treatment.